भाेजपुर अागलागीमा क–कस्का घर परे ? « Deshko News
भाेजपुर अागलागीमा क–कस्का घर परे ?
अाइतबार साँझ भाेजपुर सदरमुकाममा अागलागी हुँदा ७ घर जलेर पूर्ण रूपले नष्ट भएका छन् । भाेजपुर नगरपालिका ५ भाेटेपसलमा रहकाे मिलन ज्वेलर्सवाट ग्याँस पड्केर सुरू भएकाे अागलागी करिब तीन घण्टा पछि नियन्त्रणमा अाएकाे हाे ।
अागलागीबाट गणेश श्रेष्ठ, बद्री राणा, लालबहादुर विक, अर्विन बराइली, थिरबहादुर पाेर्तेल, फबिन्द्र प्रधान र विश्व प्रधानकाे घर जलेल नष्ट भएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय भाेजपुरका निमित्त प्रहरी प्रमुख राधाप्रसाद पराजुलीले बताए । अागलागीकाे क्षतिकाे पूर्ण विवरण भने संकलन भइसकेकाे छैन् ।
प्रहरीले जनाए अनुसार कराेडाैंकाे क्षति भएकाे छ । जलेका अधिकांश घरमा सुन पसल थिए । स्थानीबासी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाकाे सक्रियताले भाेजपुर सदरमुकामका अन्य घरमा भने अागाे सल्किएन पाएन । पीडित परिवार अाफन्तकाे बसेका छन् ।
अागगालीले भाेजपुर सदरमुकाममा हाहाकार मच्चिनुका साथै भागदाैड समेत भएकाे थियाे । अधिकांश बजारका स्थानीयले अाफ्ना सामान बाहिर निकालेका थिए । कतिपयले घर भित्र सामान राखेका छन् भने कतिपयले बाहिर नै राखेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ ।
अागलागी भएकाे स्थानमा प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेकाे छ ।
भाेजपुरकाे भाेटेपसलमा अागलागी हुँदै